Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eBudapest zisiya eDubai kwi-flydubai ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Ukunceda abahambi beshishini kunye nabakhenkethi ngokufanayo, ukufika kwe-flydubai kuya kukhulisa amandla eSikhululo senqwelomoya saseBudapest kwiziko elibaluleke kakhulu kwihlabathi liphela. Ukwabelana ngeKhowudi kunye ne-Emirates kule ndlela kuvula ngaphezulu kweendawo ezili-190 zokuhamba ngenqwelomoya kubandakanya iAsia, iAfrika, iOstreliya neMelika.
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest siphawula uqhagamshelo lwayo lokuqala lokuvula eDubai ukusuka kwikomkhulu laseHungary.
Inkonzo ephindwe kane ngeveki kwidolophu ekuMbindi Mpuma iya kusebenza unyaka wonke.
Ukufika kwe-flydubai kwandisa kakhulu isango laseHungary lokudityaniswa kwesango le-Dubai.
Ukubhiyozela ukufika kweqabane lakhe langoku, Isikhululo senqwelomoya saseBudapest iphawule unxibelelwano lwasekhaya lwe-flydubai eDubai ukusuka kwikomkhulu laseHungary. Inkonzo yamaxesha amane evekini yokuya kwisixeko esikuMbindi Mpuma iya kusebenza unyaka wonke kwaye yandise kakhulu isango laseHungary lokunxibelelana nehabhu yaseDubai.
Kumsitho, uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, Isikhululo senqwelomoya saseBudapest uphawule wathi: “Ukunceda abahambi bamashishini kunye nabakhenkethi ngokufanayo, ukufika kwe iimpukane kwi-rollcall yethu yenethiwekhi iya kukhulisa amandla ethu kwiziko elibaluleke kakhulu kwihlabathi. Ukwabelana ngeKhowudi kunye ne-Emirates kule ndlela kuvula indawo ezingaphezu kwe-190 kubakhweli bethu kubandakanya iAsia, iAfrika, iOstreliya neMelika. ”
UGhaith Al Ghaith, CEO, iimpukane, sithe: “Siye sabona ukwanda kwesidingo sokuhamba kweli hlobo kwaye ngokuqala kweenqwelo-moya eziya eBudapest, sandisa uthungelwano lwethu ngaphezu kweshedyuli yasebusika ukuze sinike abakhweli bethu ukhetho olongezelelekileyo lokuhamba. Imisebenzi yethu esandula ukumiliselwa eHungary iyakomeleza unxibelelwano ne-UAE. ”
I-Flydubai, ngokusemthethweni I-Dubai Aviation Corporation, yinkampani ye-bhajethi ephethwe nguRhulumente e-Dubai, e-United Arab Emirates kunye ne-ofisi yayo eyintloko kunye nokusebenza kweenqwelo-moya kwi-Terminal 2 ye-Dubai International Airport. I-airline isebenza kwiindawo ezingama-95, zikhonza eMiddle East, Afrika, Asia naseYurophu ukusuka e-Dubai.
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest Ferenc LisztIsikhululo senqwelomoya esaziwa ngaphambili njengeBudapest Ferihegy International Airport nesabizwa ngokuba yiFerihegy, sisikhululo seenqwelomoya samazwe onke esikhonza ikomkhulu laseHungary iBudapest.
Isikhululo senqwelomoya samanye amazwe eDubai (IATA: DXB, ICAO: OMDB) sesona sikhululo seenqwelomoya esisebenza e-Dubai, e-United Arab Emirates, kwaye sesona sikhululo seenqwelomoya esixakeke zizithuthi zehlabathi. Kukwasisikhululo seenqwelomoya seshumi elinethoba nesixakeke kakhulu emhlabeni ngabantu abakhweli, esona sikhululo seenqwelomoya esimaxhaphetshu emhlabeni, esona sikhululo seenqwelomoya esixakeke kakhulu yiAirbus A380 kunye neentshukumo zeBoeing 777, kunye nesikhululo senqwelomoya esona siphezulu ngenani labakhweli ngenqwelomoya.